बिहानै त्रिशुलीमा भयानक दुर्घटनाः बेलेरो नदिमा खसेपछि भाग्यले बचेका ३ दाजुभाई! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/बिहानै त्रिशुलीमा भयानक दुर्घटनाः बेलेरो नदिमा खसेपछि भाग्यले बचेका ३ दाजुभाई!
धादिङ – त्रिशुलीमा केहीबेर अघि भयानक दुर्घटना भएको छ । मझीमटारबाट चितवन तर्फ जाँदै गरेको महेन्द्रा बलेरो दुर्घटनामा पर्दा गाडीसहित तिन जना युवक त्रिशुलीमा खसेका छन् । मझीमटार बाट मुग्लिङ्ग पुग्नु भन्दा अघि नै इच्छा कामना गाउँपालिका फस्लिङ नजिक चिसो पानी धारा नजिक यो दुर्घटना भएको हो ।
पानी परिरहेको बेला तिब्र गतिमा गुडेको गाडीले मोटरसाइकललाई जोगाउन लाग्दा बिजुलीको पोलमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको स्थानीय सन्तोस पौडेलले बताएका छन् । सन्तोषका अनुसार गाडी बिजुलीको पोलमा ठोक्किएर १०० मिटर तल बजारिएर त्रिशुलीमा खसेपछि ३ जना युवकहरु झ्यालबाट बाहिर निस्केर पौडी खेलेर बाहिर निस्केको बताएका छन् ।
उनका अनुसार बेनीघाट रोराङका निरज रिजाल अमृत मल्ल र गोरे भन्ने युवकहरु हुन् । सन्तोषले भने, भाइहरु आज ठुलो दुर्घटनाबाट बच्नु भएको छ सुन्दा पनि आङ नै सिरिङ्ग बनाएको उनले बताएका छन् । उनीहरु बाहिर निस्के तर गाडी भने बेपत्ता भएको छ । दुर्घटनामा परेका युवकहरु घाइते भएका छन् ।
सन्तोषले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्दै भनेका छन्, नयाँ जीवन पाउने हाम्रा भाइहरु, इश्वर सदैब दाहिने भए पछि कसै केहि लाग्दैन भने जस्तै फिस्लिङ नजिक महेन्द्रा बोलेर दुर्घटनामा अन्दाजि १०० मिटर तल बजारिदै त्रिशुली नदिमा गाडी सहित डुबेर पनि सकुसल पौडी खेलेर बाच्न सफल भएका तीन भाइहरुको स्वास्थ्य स्थिति समान्य घाउ चोट भए पनि सिघ्र स्वास्थ लाभको कामना गर्द्छु।
अकल्पनीय घटना र गाडी ठोकिएर बिजुलीको पोल भाँचिएर तारबाट करेन्ट प्रवाह हुँदै नदिमा गाडी बेपत्ताको स्थित हेर्दा पुनर्जीवन पाएकोमा भाइहरु लई बधाई साथै धेरै माया।
बन्दाबन्दीमै छापियो साढे ३ लाख ‘स्मार्ट लाईसेन्स’
१२ दिनपछि कन्चन पहिलो पटक बोले, आमाले रु’दै पत्रकारलाई गरिन् फोन (हेर्नुस् भिडियो)
तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह !
दीपाश्री निरौला लेख्छिन- आज नारी घरभित्रै सुरक्षित छैनन्
कहाँबाट कस्तो देखियो खण्डग्रास सूर्यग्रहण ? फोटोमा हेर्नुहोस्